कृषि | suryakhabar.com | Page 40
on: December 23, 2017 In: कृषिTags: किसान चिन्तित, मूल्य ओरालो लागेपछि चिराइतो बारीमै सुकेर गयोNo Comments
सोलुखुम्बु । मूल्य ओरालो लागेपछि बिक्री नभएर चिराइतो बारीमै सुकिन थालेपछि किसान चिन्तित भएका छन् । राम्रै आम्दानी हुने भएपछि सोलुखुम्बुका किसान विगत एकदशकयता चिराइतोखेतीतर्फ आकर्षित बनेका थि...	Read more
on: December 22, 2017 In: कृषिTags: फष्टाउँदै मौरीपालन व्यवसायNo Comments
अर्घाखाँची । जिल्लाको ढिकुराको माहुरीपालक कृषक शुभप्रकाश खनाल अचेल माहुरीको स्याहारसुसारमा व्यस्त छन् । मौरीपालन शुरु गर्नुभन्दा पहिले उनी भारतमा मजदुरी गर्थे । खनालले एक हप्तामा आधुनिक घारब...	Read more
काठमाण्डौका पशुपतिका बाँदरले म्याग्दीका किसानलाई पारे हैरान
on: December 17, 2017 In: कृषिTags: काठमाण्डौका पशुपतिका बाँदरले म्याग्दीका किसानलाई पारे हैरानNo Comments
बेनी । पश्चिम नेपालको पशुपतिनाथका नामले परिचित म्याग्दीको गलेश्वरधाम क्षेत्रको पश्चिमतर्फ रहेको सल्लेरीको जंगलमा काठमाडौँको पशुपतिनाथ परिसरबाट ल्याएर छोडिएका बाँदरको बिगबिगी बढेपछि कृषकलाई स...	Read more
यस कारण भयो, धान उत्पादनमा कमी
on: December 15, 2017 In: कृषिTags: धान उत्पादनमा कमी, यस कारण भयोNo Comments
चितवन । बाढीले धानखेत बगाउँदा र रोग लाग्दा यसवर्ष जिल्लामा धान उत्पादनमा कमी आएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार ४।६ प्रतिशतले धान उत्पादनमा कमी आएको हो । यसवर्ष ९७ हज...	Read more
टनेलप्रति किसानको आकर्षण बढ्दै
on: December 14, 2017 In: कृषिTags: No Comments
दार्चुला– पछिल्लो समय जिल्लाका अधिकांश किसान टनेलमा विभिन्न मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी लगाइरहेका छन् । खुल्ला रुपमा भन्दा टनेलमा बढी तरकारी उत्पादन हुने भएका कारण किसान त्यसतर्फ आकर्षित हुन था...	Read more
on: December 13, 2017 In: कृषिTags: No Comments
गाईघाट, उदयपुर । यस वर्ष उत्पादन भएको सुन्तलाले उचित मूल्य पाउन नसक्दा किसान चिन्तित बनेका छन् । ओख्ले, रुपाटार, ठानागाउँ, हर्देनी, मयंखु, सिरीसे, बाहुनीटार लेखगाउँ, रौता, आँपटार, जाँते क्षे...	Read more
on: December 12, 2017 In: कृषिTags: सुन्तला उत्पादनमा कमीNo Comments
पोखरा । यस वर्ष कास्कीमा सुन्तला उत्पादनमा कमी आएको छ । सुन्तला बगैँंचामा ह्रास, बोट सुक्दै जानु र मलजल तथा गोडमेलको कमीले उत्पादनमा पाँच प्रतिशतले कमी आएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रच...	Read more
दाङमा वैदिक कृषि केन्द्र स्थापना हुने
on: December 11, 2017 In: कृषिTags: No Comments
काठमाडौँ । हजारौँ वर्षदेखि अपनाउदै आएको वैदिक कृषि पद्दतिलाई विर्सदा रासायनिक तत्व मिसिएका अनाजका माध्यमबाट विभिन्न रोग फैलिएकाले आफ्नै पद्दतिमा फर्कनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नेपाल संस्कृत वि...	Read more
सुन्तला उत्पादनमा कमी आएपछि किसान चिन्तित!
on: December 05, 2017 In: कृषिTags: No Comments
पाल्पा । यस वर्ष जिल्लामा सुन्तला उत्पादनमा कमी आएपछि किसान चिन्तित बनेका छन् । फूल फुल्ने समयमा असिना पर्नु र विभिन्न किसिमका रोगको आक्रमणले सुन्तला उत्पादनमा कमी आएपछि किसान मर्कामा परेका...	Read more
पाल्पा जिल्लामा धान उत्पादनमा वृद्धि
on: December 03, 2017 In: कृषिTags: No Comments
पाल्पा । जिल्लामा धान उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । उन्नत जातको धान खेतीप्रति आकर्षित हुनु, समयमै खेती हुनु, मलखादको पर्याप्त सुविधा हुनु, रोग नलाग्दा धान उत्पादनमा वृद्धि भएको हो ।	Read more
कृषि सिञ्चाईका लागि जलाशय निर्माण गरिने
on: November 29, 2017 In: कृषिTags: No Comments
बुटवल । चुरे संरक्षण र जल पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यसहित रुपन्देहीको सैनामैनामा विशाल जलाशय निर्माण गरिने भएको छ । सिँचाइ सुविधा पुर्याउने तथा चुरे भावर संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखेर उक्त...	Read more
on: November 21, 2017 In: कृषिTags: No Comments
चितवन । भैँसीपालन र उत्पादनको क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका विश्वका विभिन्न देशका वैज्ञानिक सहभागी भएको ‘अन्तर्राष्ट्रिय भैँसी विज्ञको समगोष्ठी’ ले चार बुँदे निष्कर्ष निकालेको छ ।	Read more
भद्रपुर नगरपालिकाले बाँड्यो किसानलाई डिप बोरिङ
on: November 20, 2017 In: कृषिTags: No Comments
सुरुङ्गा । भद्रपुर नगरपालिकाले मेची पारिका किसानलाई डिप बोरिङ वितरण गरेको छ । भारतीय सीमावर्ती नाकासँग जोडिएको भद्रपुर–३ स्थित मेची नदी पारिको बस्तीमा करिब १५० घरपरिवार बसोवास गर्दै आएका छन्...	Read more
भैँसी विज्ञको पहिलो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन सुरु
on: November 16, 2017 In: कृषिTags: No Comments
रत्ननगर । चितवनको सौराहामा बुधबारदेखि भैँसी विज्ञको पहिलो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन शुरु भएको छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा आइपी ढकालले उक्त सम्मेलनको उद्घाटन गरे ।	Read more
किसानको नियन्त्रणमा महाप्रबन्धक
on: November 15, 2017 In: कृषिTags: किसानको नियन्त्रणमा महाप्रबन्धकNo Comments
रौतहट । रौतहट गरुडास्थित श्रीराम सुगर मिल्सको उखु महाप्रबन्धकसहित दुईजना कर्मचारी र उनीहरु चढेको गाडी किसानले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ । मिललाई उखु दिनका लागि किसानलाई जानकारी दिन गएका मिलक...	Read more
स्वदेश फर्किएपछि उनीहरुले घरैमा बसेर लाखौँ रुपैयाँ ….
on: November 12, 2017 In: कृषिTags: No Comments
तेह्रथुम । जिल्लाबाट वर्षेनी युवा रोजगारीका लागि विदेसिने क्रम बढ्दो छ । परदेशमा मनग्य कमाइ हुन्छ भन्ने सोच सबैमा देखिन्छ । विदेशमा नेपालमा भन्दा दुःखकष्ट बढी भोग्नुपर्छ । तर विदेशको जस्तो द...	Read more
महोत्तरीको गौशालालाई कृषि शहर बनाइने
महोत्तरी । विनाविभागीयमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले वाम गठबन्धनले पाँच वर्षभित्र नेपालको आधारभूत समस्यालाई समाधान गरेर जनताको मौलिक हकलाई सुरक्षित गर्ने बताएका छन् ।	Read more
लिफ्ट प्रविधिको सिँचाइ आयोजना निर्माण
on: November 10, 2017 In: कृषिTags: No Comments
म्याग्दी । बेनी नगरपालिका– २ खबरामा जिल्लामै पहिलो पटक ‘लिफ्ट’ प्रविधिको सिँचाइ आयोजना निर्माण भएको छ । तरकारी खेतीको पकेट क्षेत्र खबरामा लिफ्ट प्रविधिको आयोजनामार्फत हाँडेभिरस्थित म्याग्दी...	Read more
अठार वर्षपछि कटारीको कृषि उपज केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइँदै
गाईघाट । कटारी नगरपालिकाको कटारी बजारमा १८ वर्षअघि निर्माण भएको कृषि बजार तथा कृषि उपज केन्द्र अहिले बल्ल प्रयोगमा ल्याउन लागिएको छ । झण्डै सात कट्ठा जग्गामा आठ वटा कृषि भवनसहित निर्माण गरिए...	Read more
देशभर मलको अभाव, कृषक मारमा
on: November 08, 2017 In: कृषिTags: No Comments
काठमाण्डौ । कृषि सामग्री कम्पनीले नियतवश खरिद प्रक्रिया लम्ब्याएपछि मलको चर्को अभाव भएको छ । कम्पनीले मल खरिद गर्न आफैंले बनाएको वार्षिक कार्ययोजनाविपरीत देशभर मल अभाव गराएको हो । गतवर्ष खरि...	Read more